Sony ရဲ့လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာကင်မရာကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည် - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Sony ရဲ့လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာကင်မရာကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 23 ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 10.22 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Sony ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု startup ZMP နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကင်မရာကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီစတင်ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သစ်ထုတ်လုပ်သူ, Aerosense, Sony ရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုလိမ့်မည်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝေဟင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းထောက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုဖန်တီးရန်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအကွာအဝေးကနေနည်းပညာကို sensing နှင့် networking.
ZMP သူတို့ကိုပျံသန်းဖြစ်စေခြင်းငှါစက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဦးမည်. Sony ကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များရောင်းချမည်မဟုတ်ပေမယ့်တိုင်း "အဘို့ထိုသူတို့ငှားရမ်းလိမ့်မည်, စစ်တမ်းကောက်ယူ, စောင့်ကြည့်, နှင့် "စစ်ဆေး.
Related: သူတို့မဆငျမခွလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်လေယာဉ်အန္တရာယ် 'လျှင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသုံးပြုသူများကိုထောင်ဒဏ်ရင်ဆိုင်ရ’
High-powered ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအကြီးစားပြည်တွင်းစစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့ကြ, ဒါပေမဲ့ဒေသများရောက်ရှိရန်အန္တရာယ်များသောသို့မဟုတ်ခက်ခဲစစ်တမ်းကောက်ယူဘို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သူတို့ရဲ့အသုံးသူ့ရဲ့နို့စို့အရွယ်၌ရှိ၏.
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအီလက်ထရွန်းနစ်အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဒေသများ၏တဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်, တည်ငြိမ်တဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဆက်ထိန်းဖို့လိုအပျတဲ့ sensor များနှင့်နည်းပညာများကိုစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လာကြပါပြီအဖြစ်, သူတို့ကိုစီးပွားရေးနှင့်စားသုံးသူနှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်အလားအလာ device ကိုအောင်.
ထက်လျော့နည်း£ 50 ကိုအခြေခံလူသုံးကုန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ရရှိမှု privacy ကိုပတ်ပတ်လည်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, လေယာဉ်ပျံအနီး-Miss တခုတိုးလာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာအတူ.
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားအသုံးပြုမှုကိုကျော်ဥပဒေပြုသူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပြန်ကျင်းပခဲ့သည်. UK ရှိ ကင်မရာများနှင့်အတူမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအဆောက်အဦးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ 50 အတွင်းသို့မဟုတ်အတွင်းပျံသန်းမရရမယ် 150 built-တက်ဧရိယာ၏မီတာအောက်တွင်ထားရှိမည် 400 ခြေရင်း. အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားအစဉ်အမြဲလေယာဉ်မှူးများ၏ 500 အတွင်းနှင့်မျက်မှောက်သူတို့ရဲ့လိုင်းအတွင်းပျံသန်းရဦးမည်.
US မှာ, Amazon နဲ့အခြားကုမ္ပဏီများအခြားအသုံးပြုမှုတို့တွင်အပေးအပ်ခြင်းန်ဆောင်မှုများအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဘယ်မှာ, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားလေယာဉ်အုပ်ချုပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖက်ဒရယ်လေကြောင်းအာဏာပိုင်များကတည်းဖြတ်မူအောက်တွင်ရှိနေ (FAA).
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည် အောင်မြင်စွာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ တစ်ဦး FAA-အတည်ပြုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကနေတဆင့်ဝေးလံခေါင်သီဆေးခန်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမှ.
Sony ကသူ့ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကုမ္ပဏီစက်မှုအသုံးပြုမှုအတွက်ရှေ့ကွေး၏ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်, ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာဂျပန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသြစတြေးလျကုမ္ပဏီ Flirtey အဖြစ်ကုမ္ပဏီပေါင်းအတွက် Yamaha နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်.
• US မှာလုပ်ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပေးပို့
24054	0 အပိုဒ်, စီးပွားရေး, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (Non-စစ်ရေး), သတင်း, စက်ရုပ်, ရှမွေလသည် Gibbs, Sony က, နည်းပညာ
← သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးစျေးပေါ Laptop ကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်? မြေကြီးတပြင် 2.0: နာဆာသိပ္ပံပညာရှင်တွေက '' အနီးကပ်ဆုံးအမွှာတွေ့ပြီကပြောပါတယ်’ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ဟာပြင်ပက →